More relief flight to bring backs Myanmar people stranded in Malaysia | Myanmar Business Today
Home Business More relief flight to bring backs Myanmar people stranded in Malaysia
The Ministry of Foreign Affairs said that it will arrange additional relief flights to bring back Myanmar citizens stranded in Malaysia and having difficulties continue living there.
Myanmar has been flying relief flights to Malaysia every Wednesday to bring back Myanmar migrant workers, those to return home after being released from prisons, and other Myanmar citizens living in Malaysia without official documents. The relief flights are arranged by the Myanmar Embassy in Kuala Lumpur in line with the instruction by the National Committee for Prevention, Control, and Treatment of COVID 19. Now, it will add two additional relief flights every Monday and Thursday.
The country has arranged 44 relief fights bringing back 7,536 people stranded in Malaysia. However, there are around 15,000 Myanmar citizens in Malaysia waiting to come back to Myanmar and the government decided to add more relief flights to bring them back sooner.
The Myanmar Embassy in Kuala Lumpur also urged Myanmar citizens in Malaysia having difficulties with food and lodging to contact it and promise to help them go home with relief flights flying every Monday, Tuesday, and Thursday between Yangon and Kuala Lumpur.
Moreover, those who want to go to Malaysia can also contact the relief flights flying to Malaysia, according to the Ministry of Foreign Affairs.
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထပ်တိုး ကယ်ဆယ် ရေး လေယာဉ်ပြေးဆွဲမည်ဟုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရသည်။
နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များ ပြေးဆွဲ မှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားစဉ် ကာလအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ပြစ်ဒဏ်ကာလပြီးဆုံးသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ခွင့်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများ၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ပြီးသည့် အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သားများ စသည်တို့ကို Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာ လမ်ပူမြို့၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုဖြင့် အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတွင် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် ပြေးဆွဲခဲ့ပြီး နောင်တွင် အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ နှင့် ကြာသပတေးနေ့တို့တွင် ထပ်တိုးကယ်ဆယ် ရေးလေယာဉ်(၂) ကြိမ် ထပ်မံပြေးဆွဲသွားမည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံ သားများအား ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပူ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်အတိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး/အထူးလေယာဉ် ဖြင့် (၄၄)ကြိမ်ပျံသန်းပြေးဆွဲကာ မြန်မာနိုင်ငံသား (၇,၅၃၆)ဦးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ခေါ် ဆောင် ပေးခဲ့ကြောင်း သို့သော် မလေးရှားနိုင်ငံ တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၅,၀၀၀) ဦးခန့် (မြန်မာ အလုပ် သမားများ၊ ထိန်းသိမ်းခံများ၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ပြီးသူ အထောက် အထားမဲ့များ) ကျန်ရှိနေသေးသဖြင့် ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နေထိုင်စားသောက်ရေး အခက် အခဲများ အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ကာ ထပ်တိုးကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ် (၂) ကြိမ် တိုးမြှင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် မလေးရှားရောက် အခက်အခဲရှိနေသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မြန်မာသံရုံး၊ ကွာ လာလမ်ပူမြို့သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်း ခံကြရန်နှင့် ဆက်သွယ်လာသူများကို ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပူ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်အတိုင်း အပတ် စဉ် တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့နှင့်ကြာသပတေး နေ့ တိုင်း ပြေးဆွဲပျံသန်းမည့် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်များတွင် ဦးစားပေးအလိုက် လိုက်ပါ နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
ထို့အပြင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အကြောင်း အမျိုး မျိုးဖြင့် ထွက်ခွာလိုသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်း လိုင်းသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနက အသိပေးထားသည်။
I’m sick of having to defend my job and my job role. And surely the point being made in the article is that the law allows pharmacists to act on the basis that their religious beliefs are “legitimate grounds for refusal,” and to question if that should be the case, given the potentially serious consequences of their refusal. Leaveacomment. viagra malaysia Listen Now.
You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you. buy viagra online Havealook at my web site: readthedocs.
Previous article1.5 million units of COVID-19 vaccine to arrive on January 22
Next articleGovt provides food to migrant workers in Thailand